Ataovy miavaka amin'ny lisitra WordPress ny lisitry ny tsoratadidy
Manampia Pejy misy rohy amin'ny Template WordPress anao
Alarobia, Novambra 9, 2011 Alarobia, Novambra 9, 2011 Douglas Karr
Niasa tamina tranokalan'ny mpanjifa izahay androany hanampiana an iPad Cover Review lisitra amin'ny tranokala. Raha tokony tanisaina anaty pejy na paositra izy rehetra dia nanapa-kevitra ny hanangana pejy modely izay nisintona sokajy rohy iray avy amin'ny WordPress 'build in Links fizarana, antsoina hoe "Review".
Ny WordPress API efa manana fiasa namboarina, antsoina wp_list_bookmarks, izay mamolavola ny tsoratadidy ao anaty endrika lisitra tsy voafehy. Ny olana dia ny tsy ahafahanao manampy lasibatra amin'ny marika vatofantsika hanokatra ny rohy ao anaty vakizoro na fikandrana vaovao. Ka… mila manoratra ny tadinao ianao mba hahatanteraka izany. Azonao atao izany amin'ny get_bookmarks ny asa.
Voalohany, ho azoko ireo rohy mankamin'ny laharana iray ary hanafatra azy ireo hiakatra, amin'ny anarany avy hatrany amin'ny sokajy rohy Review. Avy eo mamoaka ny HTML aho hamokarana ny lisitra:
'name', 'order' => 'ASC', 'kategorya_name' => 'Hevitra')); // Loop amin'ny tsoratadidy tsirairay ary asehoy ny alo-pitodika efa voafaoka (rohy $ ho rohy $) link_url.'" target="_blank">'; link_url.'" target="_blank">echo $ link-> rohy_name. ' - '; echo $ link-> link_description; ako ' '; }?>
Ankehitriny ianao dia afaka mamorona ny lisitra na izany aza tianao amin'ny marika na inona na inona tianao. Nentinay tamin'ny faran'izay mafy tao amin'ny tranokalanay izany mba hojerena ny lisitry ny mpanjifanay, izay nampidirinay koa sary thumbnail mivantana an'ny tranokala. Azonao atao koa ny manampy a nofollow tenifototra.
Mandefasa mailaka fanao tsara indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra